सीपीएलः सन्दिप आवद्ध टिमलाई लगातार झट्का, पाँचौ विकेट पतन! [LIVE] – Everest Dainik – News from Nepal
सीपीएलः सन्दिप आवद्ध टिमलाई लगातार झट्का, पाँचौ विकेट पतन! [LIVE]
काठमाडौं, साउन ३१ । वेस्टइन्डिजमा भइरहेको क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल)मा नेपाली युवा खेलाडी सन्दिप लामिछाने आवद्ध सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियोट्सले १७९ रनको विजयी लक्ष्य पाएको छ । टस जितेर पहिलो फिल्डीङ रोजेको सन्दिपको टोलीले निर्धारित २० ओभरको खेलमा ४ विकेटको क्षतीमा १७९ रनको विजयी लक्ष्य पाएको हो ।
खेल आन्द्रे रसलको कप्तानीमा रहेको जमैका तलवाससँग खेल भइरहेको छ । जमैकाका लागि केनर लुइसले ४९, ग्लेन फिलीप्सले ४१, रोभम्यान पावेलले १८, रोस टेलरले ५१ र कप्तान आन्द्रे रसलले १० रन बनाए ।
खेलको लाइभ स्कोर हेर्न यहाँ क्लिक गर्नस्
प्याट्रियोट्सका लागि नेपाली लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेले २, बेन कटिङ र कार्लोशले समान १ १ विकेट लिन सफल भए । आज पनि नेपाली युवा खेलाडी सन्दिपको शानदार प्रदर्शन रह्यो । उनले आफ्नो दोस्रो ओभरमा महत्वपूर्ण २ विकेट लिए । उनले आफ्नो टिमका लागि पहिलो विकेटका रुपमा केनर लुइसलाई आउट गरे । बिस्फोटिङ ब्याटिङ गरिरहेका उनलाई सन्दिपले ४९ रनमा आउट गरेका थिए । यस्तै, उनले दोस्रो ओभरमा नै आन्द्रेलाई शून्य रनमा पवेलियन फर्काए ।
दोस्रो ओभरमा नै २ विकेट लिएका हुन् । सन्दिपले आफ्नो पहिलो ओभरमा १० रन खर्च गरेका गरेका थिए । तेस्रो ओभरमा मात्र एक रन दिए । भने, अन्तिम ओभरमा ३ रन दिए ।
अहिले जवाफी ब्याटिङमा सन्दिप आवद्ध टिमले खराब शुरुवात गरेको छ ।
उसले ५० रन नपुग्दै महत्वपूर्ण ३ विकेट गुमाएको छ । कप्तान क्रीश गेलले आज पनि लामो पारी खेल्न सकेनन् । उनले ३ चौका र एक छक्का प्रहार गर्दै मात्र २४ रन बनाएर आउट भए । उनलाई थोमसले क्याच आउट गराएका हुन् । चौथो विकेटका रुपमा एन्टोन डेभिस आउट भएका छन् । उनी ११ रन बनाउँदै आउट भए । उनलाई आन्द्रे रसलले क्टाच आउट गराएका हुन् ।
यस्तै, इभन लुएस शून्य रनमा नै पवेलियन फर्किदा टोम कोपर ७ रन बनाएर आउट भए । चौथो विकेटका रुपमा एन्टोन डेभिस आउट भएका छन् । उनी ११ रन बनाउँदै आउट भए । उनलाई आन्द्रे रसलले क्टाच आउट गराएका हुन् ।
पाँचौ विकेटका रुपमा विकेट किपर थोमस आउट भएका छन् । उनी १० रन बनाउँदै आउट भएका हुन् । सन्दिपको टिमले टस जितेर पहिलो फिल्डीङ रोजेको हो । प्याट्रियोट्सको यो तेस्रो खेल हो । उसले यसअघि एक खेल हारेको छ भने एक खेल जितेको छ ।
ट्याग्स: Chris Gayle, CPL, sandeep lamichhane